Webiyada iyo ilaha iimaanka | Apg29
Qoraalkani wuxuu ku kitaabiga ah waxaa prophetically / Ruuxa Quduuska ah si xoog leh u eedeeyay in qalbiyadeenna, "waa" hadaaqo iyo timaha madaxa naga on sara kaco.
Sababta oo ah marka aan ka fekero Garden of Eden / Jannada, waxaan la soco in markii Aadan iyo Xaawo waxay mar dambe loo ogol yahay inuu meeshaas sii joogo sababtoo ah dayrta - si ay u muuqato in ay wado bari, iyo bari oo beerta ku yaal.
Xitaa badan oo masiixiyiin ah, taasoo ah macnaha Mu'miniinta nooleenta, shaki, nasiib daro, Kitaabka isku halaynta. Laakiin tani waa naadiyeen in waa ka buuxaan rumaysad sida dajinta Ilaaha runta ah ee Kitaabka Quduuska ah. In muddo ah aan la qaado oo eegno galay qaar ka mid ah fikradaha sheegid weyn ee Kitaabka Quduuska ah, waayo tiro kuwaas badbaadiyo inta badan iimaanka oo dagaalka ku jira maalin kasta oo Ruuxa ka dhanka ah awoodaha xun iyo wejiga dhibaatooyinka multifarious maalin kasta, sidaas darteed waxaa ugu yaraan ii. Waxaa jira waqti hadda ma in ay lumiyaan kalsoonida ee Kitaabka Quduuska ah. On lid ku ah, waa waqti ay ku qaadan iimaanka ah oo qoto dheer oo ku nool. Waa maxay sababta? Waa hagaag, hadda waa wakhtigii in hadalka nebiyadii xitaa more la oofin doono. Raac qoraalka 1 Gen 2: 10-14 iyo John 19: 33-34:
"Laga soo bilaabo Eden, waxa uu ahaa sida webi oo kale inuu beerta waraabiyo, ka dibna waxaa loo qaybiyaa afar laamood ugu weyn. Magaca koowaad waa Fiishoon. Waa mid ka mid ah in la barwaaqaysan hareereeyeen dalkii Xawiilaah oo dhan, meeshaas oo dahab leh. dahab ah ee dalkaas ku wanaagsan yahay, meeshaasuna waxay leedahay beduliyum iyo dhagaxyo onika la yidhaahdo. Webiga labaad waa Giixoon. Waa mid ka mid ah in la barwaaqaysan dhulka Kuush oo dhan ku wareegsan. Webiga saddexaad waa Xiddeqel. Waa mid ka mid ah in bari socodka Ashuur. Webiga afraadna waa Yufraad. "-" Laakiin markay u yimaadeen Ciise oo ay arkeen inuu durba dhintay, kama ay jebin lugihii. Halkii dusin mid ka mid ah askartii uu dhinaca Ciise waran, oo markiiba waxaa ka soo baxay dhiig iyo biyo. "
Xarunta u ah dunida oo
Waxa aynu ku saabsan ka akhriso halkan, juqraafi ahaan, Kitaabka Quduuska ah ka, waa meesha xarunta u ah dunida oo (cf. Yexesqeel 32:12). Sayidka Jannada Gaarna jireed / Eden Eden (korontada EDANS Hebrew Aden..); aawadiis macaan park nimcaysan yahay; meel biyo-hodan ku dhal badan marsada. Foomka A luqada of Eden, ednah ee Adan, taas oo macnaheedu yahay "in uu iska dhigi maalmood ku faraxsan yahay" in ammaanka, Heb. Gan ka Ganan; "Ilaali" / "loo ilaalin". Cf. la qoraalka Cibraaniga ah oo ka mid ah Song of Solomon 4:12, la siiyo tarjumaadda: "beerta An ku lifaaqan waa walaashay, aroosaddaydiiyey, a xiran yihiin si fiican, il shaabadeeyey". Oo ka buuxin ginnah Hebrew sida in Ester 1: 5, 7: 7-8; goob kulan u ah nolosha bulshada iyo digtoonaan, "In beerta deyr leh oo ay reer boqor lahaa." Halkee ee Garden of Eden, Ilaah la malaa'igihiisa lahaayeen "aaminsan", ama abeesadii "yahannadu" ka hor inta Aadan iyo Xaawo ee dayrta ka nimco, ma hayno xogta Kitaabka Qudduuska ah. Laakiin waxa aan arki karnaa in beerta waxaa kaliya ma lagu gartaa "ruuxa" dhaqdhaqaaqa. Haddii aan intaas dheer hawlaha jirka markii beerta la "kaymo iyo raagayaan." Eden, malaha wuxuu ahaa ma ahan oo keliya xarunta u ah dunida oo macne weyn, laakiin si gaar ah waxaa joogay carshiga Yeruusaalem - ama ka badan ee xarun u xoog, meeshii macbudka ugu horeysay (Sulaymaan) Yeruusaalem 900 f kr.. mar istaagay - iyo meesha Ciise iskutallaabtiisa mar ka taagay. Waxaan tilmaan meesha uu "qalbiga dhulka" ka. Tani waa meesha ugu geliyeen handarraabbadeedii iyo weerarada, siyaasadda iyo diinta, sida in meel kale ma jiro. Iyo meel kale oo dhulka, sax iyo sidoo kale waa markii ugu sidaas sheegid in arrinta Yeruusaalem. Oo markaas dabaysha Yeruusaalem iyo macbudka muhiim ah. Laakiin waxa aan arki karnaa in beerta waxaa kaliya ma lagu gartaa "ruuxa" dhaqdhaqaaqa. Haddii aan intaas dheer hawlaha jirka markii beerta la "kaymo iyo raagayaan." Eden, malaha wuxuu ahaa ma ahan oo keliya xarunta u ah dunida oo macne weyn, laakiin si gaar ah waxaa joogay carshiga Yeruusaalem - ama ka badan ee xarun u xoog, meeshii macbudka ugu horeysay (Sulaymaan) Yeruusaalem 900 f kr.. mar istaagay - iyo meesha Ciise iskutallaabtiisa mar ka taagay. Waxaan tilmaan meesha uu "qalbiga dhulka" ka. Tani waa meesha ugu geliyeen handarraabbadeedii iyo weerarada, siyaasadda iyo diinta, sida in meel kale ma jiro. Iyo meel kale oo dhulka, sax iyo sidoo kale waa markii ugu sidaas sheegid in arrinta Yeruusaalem. Oo markaas dabaysha Yeruusaalem iyo macbudka muhiim ah. Laakiin waxa aan arki karnaa in beerta waxaa kaliya ma lagu gartaa "ruuxa" dhaqdhaqaaqa. Haddii aan intaas dheer hawlaha jirka markii beerta la "kaymo iyo raagayaan." Eden, malaha wuxuu ahaa ma ahan oo keliya xarunta u ah dunida oo macne weyn, laakiin si gaar ah waxaa joogay carshiga Yeruusaalem - ama ka badan ee xarun u xoog, meeshii macbudka ugu horeysay (Sulaymaan) Yeruusaalem 900 f kr.. mar istaagay - iyo meesha Ciise iskutallaabtiisa mar ka taagay. Waxaan tilmaan meesha uu "qalbiga dhulka" ka. Tani waa meesha ugu geliyeen handarraabbadeedii iyo weerarada, siyaasadda iyo diinta, sida in meel kale ma jiro. Iyo meel kale oo dhulka, sax iyo sidoo kale waa markii ugu sidaas sheegid in arrinta Yeruusaalem. Oo markaas dabaysha Yeruusaalem iyo macbudka muhiim ah. Eden, malaha wuxuu ahaa ma ahan oo keliya xarunta u ah dunida oo macne weyn, laakiin si gaar ah waxaa joogay carshiga Yeruusaalem - ama ka badan ee xarun u xoog, meeshii macbudka ugu horeysay (Sulaymaan) Yeruusaalem 900 f kr.. mar istaagay - iyo meesha Ciise iskutallaabtiisa mar ka taagay. Waxaan tilmaan meesha uu "qalbiga dhulka" ka. Tani waa meesha ugu geliyeen handarraabbadeedii iyo weerarada, siyaasadda iyo diinta, sida in meel kale ma jiro. Iyo meel kale oo dhulka, sax iyo sidoo kale waa markii ugu sidaas sheegid in arrinta Yeruusaalem. Oo markaas dabaysha Yeruusaalem iyo macbudka muhiim ah. Eden, malaha wuxuu ahaa ma ahan oo keliya xarunta u ah dunida oo macne weyn, laakiin si gaar ah waxaa joogay carshiga Yeruusaalem - ama ka badan ee xarun u xoog, meeshii macbudka ugu horeysay (Sulaymaan) Yeruusaalem 900 f kr.. mar istaagay - iyo meesha Ciise iskutallaabtiisa mar ka taagay. Waxaan tilmaan meesha uu "qalbiga dhulka" ka. Tani waa meesha ugu geliyeen handarraabbadeedii iyo weerarada, siyaasadda iyo diinta, sida in meel kale ma jiro. Iyo meel kale oo dhulka, sax iyo sidoo kale waa markii ugu sidaas sheegid in arrinta Yeruusaalem. Oo markaas dabaysha Yeruusaalem iyo macbudka muhiim ah. Waxaan tilmaan meesha uu "qalbiga dhulka" ka. Tani waa meesha ugu geliyeen handarraabbadeedii iyo weerarada, siyaasadda iyo diinta, sida in meel kale ma jiro. Iyo meel kale oo dhulka, sax iyo sidoo kale waa markii ugu sidaas sheegid in arrinta Yeruusaalem. Oo markaas dabaysha Yeruusaalem iyo macbudka muhiim ah. Waxaan tilmaan meesha uu "qalbiga dhulka" ka. Tani waa meesha ugu geliyeen handarraabbadeedii iyo weerarada, siyaasadda iyo diinta, sida in meel kale ma jiro. Iyo meel kale oo dhulka, sax iyo sidoo kale waa markii ugu sidaas sheegid in arrinta Yeruusaalem. Oo markaas dabaysha Yeruusaalem iyo macbudka muhiim ah.
Masiibooyinka / falalka xukunka
Waxaan u baahanahay in maskaxda lagu hayo, marka aan ka fekero iyo Dhulka ku baran markaas iyo hadda, in ugu yaraan laba iskujoog caalamka waaweyn ee juqraafi, Kitaabka Quduuska ah sida sheekooyinka xurmada dhacay waqtiyo kala duwan masiibooyinka dabiiciga ah ama u dhaqmo xukunka rabaani ah.
Sidee dhulka sarkhaansan yihiin tallaabo Ilaah ahaa markii uu dago goobta dhismaha magaalada Babel oo facsharma / luqadda wareersan dadka, si ay u ma kasta oo kale mar dambe u fahmaan (qiyaastii 2,000 BC) - in aan waxba ka ogaan. Laakiin sida waxa loo yaqaan (1 Baxniintii 11: 8-9): "Sidaas faafidda Rabbigu iyaga soo baxay halkaas ka oo dunida oo dhan, oo dhisiddii magaaladii way joojiyeen. Waxaa la siiyey magaca Cibraaniga Babel ( "wareer" / "wareer"), maxaa yeelay, Rabbigu halkaas afkii dhulka oo dhan, oo uu kala firdhiyey iyagii dhan halkaas ka dhulka u taliyo. "
Vi har ett par andra exempel, som det känns på sin plats att omnämna här, men som vi inte heller har någon kunskap om vad de kom att betyda för jordens geografi och liv. Det första av dessa två var då Herren (c:a 1.400 år f.Kr.) stannade solens och månens gång efter sin tjänare Josuas profetiska ”bön” (Jos 10:12-13): ”På den dagen då Herren gav amoreerna i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela Israel: ´Sol stå stilla i Gibeon, måne, i Ajalons dal!´ Och solen stod stilla och månen blev stående tills folket hade hämnats på sina fiender.”
dhacdo labaad ee labada "makii", kuwaas oo horseeday go'aan-ruux muhiimadda ay dabeecadda dhulka iyo - in kastoo aysan suurto gal ahayn in ay keenaan caddaynta cilmi ahaan - waxaa ka hadlay in 2 Kings 20: 8-11 iyo dhacay 6-700 qarnigii f.Kr:.? Xisqiyaah "oo (boqorkii) ilaa (Nebi) Isaiah'Vad waa calaamadii in Rabbigu i bogsiinayo, iyo in kor baan galaa si uu guriga Rabbiga 'oo Ishacyaah wuxuu ku yidhi said'Detta ahaan doontaa calaamo xagga Rabbiga in Rabbigu ku samayn doono waxa uu yiri: (. at Boqor Aaxaas ee derejooyinkii aan note,) hadh doono (waqti) socdaan tallaabooyin toban (h) weeraryahanka ama u tag tallaabooyinka toban (h) celin doonaa? Xisqiyaah said'Det waa u fududahay hooska (waqti) si hoos tallaabooyinka toban weeraryahanka. No, waxaa halkii tallaabo toban socod (h) ha tillbaka. "Nebi Ishacyaah u qayliyey Rabbiga,
Well, dib u laba masiibooyinka / xukunka u dhaqmo, natiijooyinka caalamka oo dhan in aad ka arki kartaa raad dhulka maanta.
Kan koowaad waa "daadkii" waqti Nuux xaqa ah ee, oo ku saabsan 2400 sano ka BC (1 Baxniintii 7: 17-20, 24, 9: 18-19): "Webiga ku dul maalmood buu dhulka afartan ahaa oo intuu biyihii ku kacay iyo kor u qaadeen sanduuqii si ay si fiican u kacay dhulka kor ku xusan. Biyaha waxaa la dedejiyey oo sare u kacay dhulka kor ku xusan, iyo sanduuqii Buuraan la biyaha on. Iyo faafinta biyaha dhulka iyo aad u badan ka badan ah, ilaa qarisay oo dhan oo buuraha sare samada hoosteeda. Shan iyo toban dhudhun (oo ku saabsan 7.5 mitir, dhudhun sida ay fikradaha jir xisaabaa gacanta nin u korsan, aan note.) Xagga sare dushooda biyo Rose, oo buurihiina way qarsoomeen ... Oo biyihii waxay sare istaagay oo dhulka ku kor ku xusan ka mid ah boqol iyo konton maalmood ... wiilashii Nuux kuwaas oo u soo baxay ee sanduuqii (Buur Araarad, aan note.) waxay ahaayeen Sheem, iyo Xaam iyo Yaafed. Ham ahaa Kancaan aabbihiis. Saddexdanu waxay ahaayeen wiilashii Nuux, iyo iyaga oo ka leedahay qof walba oo dunida soo kala bixiyeen. "
The masiibooyinka dabiiciga ah labaad ama fal xukun rabaani ah, ka dhacay waqti marka qoyska Semitic ka mid ah saddex wiil oo ahaa Sheem Nuux yeedhay, awoowe Cibraaniyada (ebréerna), wuxuu ahaa firfircoon (oo sidoo kale ku saabsan 2,000 f.Kr). In 1 Gen 10: 21-25 bandhigay stage: "Wiilashii Sheemna waxay ahaayeen Ceelaam (Faaris / Iran daqiiqadii, note.), Iyo Arfaksad, iyo Luud, iyo Araam. Wiilashii Araamna waxay ahaayeen Cuus, iyo Xuul, iyo Geter, iyo Mash. Arfaksadna wuxuu dhalay Ceeber (Halkan sidaas ebréer / Hebrews, aan note.). Oo sidaas daraaddeed waxaa la yiri: "Oo Ceeberna waxaa u dhashay laba wiil. mid wuxuu ahaa Feleg (Sharing Heb.), waayo inta lagu guda jiro, waagiisii ​​ayaa dhulku qaybsamay. "
. 1 1 Bilowgii 1: 19-10 shows in Ilaah uu fal uunka oo la wadaago biyaha iyo dhul engegan, "Ilaah said'Vattnet samada ka hooseeya oo la soo wada ururin ku yidhi hal meel oo ha engegan noqdo synligt 'Ilaah wuxuu u yeedhay dhul engegan dhulka; iyo ururinta biyaha ayuu u yeedhay badaha. Oo Ilaah wuxuu arkay in taasu wanaagsan tahay. "Sida laga soo xigtay Kitaabka Quduuska ah, sidaas darteed, waxaa jiray meelaha hore ka badan oomane, laakiinse dalka ahayd hal tiro iyo badaha ayaa si gooni gooni ah la ururiyey. Laakiin sidee square in la in aanu ka badan hal qaarad lagu xisaabtami karo? Waa hagaag, in 1912 buriyay professor Jarmalka, Alfred Wegener, in hal mar ayaa ah dhaqdhaqaaqa 'qaaradood' ". Laga soo bilaabo dalka oo dhan ugu sudhay, halkaas ahayd dhacdo dabiici ah sida "kala" mass ciidda ee labada qaaradood. Iyada oo sahan ay weheliyaan bari Atlantic iyo soohdimaha galbeed, wuxuu helay sababo xoog ah inuu boqortooyada macdanta, boqortooyada dhirta iyo xayawaanka boqortooyada, in labada qaaradood waa in hal mar ayaa la soo biiray - iyo cilmi baarista la soo dhaafay ayaa disproved aragtida ah wax kasta (oo dabcan la cimiladu kala duwan dhulka) asal ahaan la isku daro. Qof kasta oo ka baran kartaa xeebaha on map caalami ah, oo waxaan arki doonaa sida ay u noqon doono in la isugu keeno, sida xujo a, ama sida cidhifyada nabarka a si buuxda uu korayo. Waa maxay waxa ay ahayd waxaan ka akhrisan Xeber, kan ahaa ina Faleg (Sharing Heb.): ". In uu waqti dhulku qaybsamay" In uu sharaxaad Bible of 1861 tarjumayaa P Fjellstedt tuducdan, in dhulka "hoos" dhaceen. Waxay ahayd a "burbur" dunida in style ka mid ah sida luuqadda caadiga ah ka hor ayaa ku soo dhacay "burburi". Qof kasta oo ka baran kartaa xeebaha on map caalami ah, oo waxaan arki doonaa sida ay u noqon doono in la isugu keeno, sida xujo a, ama sida cidhifyada nabarka a si buuxda uu korayo. Waa maxay waxa ay ahayd waxaan ka akhrisan Xeber, kan ahaa ina Faleg (Sharing Heb.): ". In uu waqti dhulku qaybsamay" In uu sharaxaad Bible of 1861 tarjumayaa P Fjellstedt tuducdan, in dhulka "hoos" dhaceen. Waxay ahayd a "burbur" dunida in style ka mid ah sida luuqadda caadiga ah ka hor ayaa ku soo dhacay "burburi". Qof kasta oo ka baran kartaa xeebaha on map caalami ah, oo waxaan arki doonaa sida ay u noqon doono in la isugu keeno, sida xujo a, ama sida cidhifyada nabarka a si buuxda uu korayo. Waa maxay waxa ay ahayd waxaan ka akhrisan Xeber, kan ahaa ina Faleg (Sharing Heb.): ". In uu waqti dhulku qaybsamay" In uu sharaxaad Bible of 1861 tarjumayaa P Fjellstedt tuducdan, in dhulka "hoos" dhaceen. Waxay ahayd a "burbur" dunida in style ka mid ah sida luuqadda caadiga ah ka hor ayaa ku soo dhacay "burburi".
Back to qoraaladii asalka ahaa: "From Eden, sida ay ahayd biyo webi beerta-barxadda ka dibna loo qaybiyaa afar laamood ugu weyn." Taasi waa, on / dhexe ee dhulka, halkaas oo macbudka Yeruusaalem ku badan dambe u yimid inuu la dhisay, waxaa jiray il dheer, soo orday webiga guuxaya. Waxaan u wac 'webiyada' il '. Oo ma waxaad ka boodi kartaa Sabuurradii 46: 5: "Waxaa jira webi ku qubanayo in bixisaan farxad magaalada Ilaah, rug quduuska ah ee Ilaaha ugu sarreeya."
Tan iyo markii 638 waa weyn oo Muslim wadini of Rock la Masjidka yar Al-Aqsa ee taariikhiga ah "Temple Mount". Sidaas daraaddeed, hoos wanaagsana in qadiimiga ah Yuhuudda iyo cilmi aadan helin, waxa uu helo inta badan sababo diimeed iyo siyaasadeed oo aan la sameynin - laakiin in macnaheedu ma aha waxay ka dhinac hoos u qodo, iyo inta lagu guda jiro "soo jeeda" reebay. Ogow, in sanadkii 1970, ayaa muujiyay ee qadiimiga ah Yuhuudda iyo reer galbeedka iyo saynisyahano - waxay hoos degaanka macbudka qadiimiga maqlay guuxeen biyaha. Waxaa jira hadal maanta oo ku saabsan "magaalada magaalada ka yar" ku saabsan meeshan. Jidka markii Ciise ilaa taasoo keentay in macbudka - (ie labaad, loo yaqaan "Temple Serubaabel", ka dib markii Yuhuudda maamulaha 500 BC, iyo "Macbadka Herodos", maxaa yeelay, Herodos Waynaa ballaarinta Macbudkan wax yar ka hor dhalashada Masiixa) - la helay sannadkii 2004. Waxaa markaas waa daryeel weyn (at halista ah ee Masjidka Al-Aqsa ee kor ku xusan way dumi lahaa) dhiraandhiriyeen iyo sanadkan sidoo kale caleemo Yeruusaalem. At furitaanka ee wadada u sheegay Madaxweyne ku xigeenka ka mid ah aasaaska "City of David", Doron Spielman ah, oo wuxuu ku yidhi, kuwo kale:. "Meeshu waa qalbiga dadka Yuhuudda ah iyo, waa dhiigga waxa in qulqulka ee xididdada our."
laakiin malaa'igtii Rabbigu la reebay xilligan la soo dhaafay iyo dhibanaha ahayd halkii wan / a "Casaaseel" kuwaas oo ku xayiran leh madaxa / mariyaa geesaha kayn (1 Exodus 22: 11-14). Taasi waa xaq!
Qoraalkani wuxuu ku kitaabiga ah waxaa prophetically / Ruuxa Quduuska ah si xoog leh u eedeeyay in qalbiyadeenna, "waa" hadaaqo iyo timaha madaxa naga on sara kaco. Sababta oo ah marka aan ka fekero Garden of Eden / Jannada, waxaan la soco in markii Aadan iyo Xaawo waxay mar dambe loo ogol yahay inuu meeshaas sii joogo sababtoo ah dayrta - si ay u muuqato in ay wado bari, iyo bari oo beerta ku yaal. At ah wax soo saarka iyo talooyin dhigay Rabbiga ah Ilaaha "eldsänglar" si ay ula socdaan sida, waayo suurto gal ka badan si uu waqooyi-galbeed ee halkaas, waxay ahayd ma aha oo kaliya geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta, laakiin sidoo kale ah "geed nolosha". Oo sidii codadka (1 Gen 3:22): "The nin Rabbiga ah Ilaaha said'Se wuxuu noqday sidii mid innaga mid ah, isagoo garanaya wanaagga iyo xumaanta. Haddaba iyadu ma uu gacantiisa soo fidiyaa oo uu wax ka qaataa geedka nolosha, oo uu cunaa oo (la dembiga, aan note.) Oo nool weligiis. "
Haddii aan hadda noo qaado in Ezekiel 46 iyo 47 iyo waxbarashada wax sii sheegidda, laga bilaabo markaas ka, oofinta maalmaha soo socda, laga yaabaa in ku saabsan aannu mar, ugu yaraan in boqortooyada imanaysa millennial Ilaah - sida uu sheegaayo in 46: 19-20: " oo isna ( "malaa'ig-nin") i soo dhex mariyey iriddii kadinka, taas oo ahayd dhinaca ku tiil, oo qolladaha quduuska ah ayaa loo magacaabay wadaaddadii oo xagga woqooyi, oo waxaan arkay in ay jirto meel fog dhinaca galbeed (ie galbeed aan, note.). Waxa uu sheegay in me'Detta waa meesha ay wadaaddadu ku karin doonaan qurbaanka xadgudubka iyo qurbaanka dembiga, iyo meesha ay ku dubi doonaan qurbaanka hadhuudhka ah oo aan haysan si ay u fuliyaan si ay barxadda dibadda iyo sidaas dadka heligt ah. ' "
Ina keena aynu joojin iyo qabaa inay halkaas oo Yeruusaalem (aagga hore ee Eden / Garden of Eden) oo ka feker waxa leeyay ahaa, at height of Ciise xanuunka dhimashada qurbaan bixinta dembiyadeenna. Waa hagaag, waxa ay noqon doontaa xagga bari ka (wax yar koonfur) tirin - xaq magaalada dhex mara, oo xaq u dhex macbudka galbeed xoogaa in a. Waxaan leenahay oo keliya ah "meel madaxiisa" (galbeed?) In Eden diiwaanka, halkaas oo dayrta ka dhacay "ayuu geedka aqoonta Xumaan wanaag" iyo meesha ay "geedka nolosha" sidoo kale istaagay. Markaasuu soo socota sida Ibraahim on goobta ugu weyn ee Moria ee (wax yar waqooyi-galbeed ah oo magaalada aan weli dhiseen Yeruusaalem geli) waa la diyaariyey si ay allabari Isxaaq. Added in tani ay tahay markii ugu qiyaasay -. Beeralay weyn Arunas iibin tumi jiray ee Sulaymaan, taas oo ku dhisan macbudka ugu horeysay on goobta ugu muhiimsan (wax waqooyi galbeed), oo wadaaddadu waa inay karkariyo qurbaanka xadgudubka iyo qurbaanka dembiga Yeruusaalem " Ugu dambeyntii, ee Ingariiska this, qaba Ciise iskutallaabta dhimasho Yeruusaalem "madaxa keeni doonaa," leeyay (la mid ah maskaxda dilaa ah), waqooyi-galbeed ka fog gaaban oo ka mid ah macbudka iyo magaalada. Taas ka dib, aaska Ciise, meel u dhow (45 m) ee hoos ku aaseen qabrigii ah, iyo qiimeeyo sida ay u tilmaamay back to Eden, in a beerta / degaanka Eden. Sida laga soo xigtay dhaqan Yuhuudi, ee Talmud, Adam waxaa lagu aasay meel this, iyo gaar ahaan dhaqan Christian gaysteen leeyay buuraha leh dhakada Adam ayaa xabaal ka yar iskutallaabta. Laakiin si nabadgelyo Kitaabka Quduuska ah ka: "In meeshii Ciise iskutallaabta lagaga qodbay waxaa ku tiil beer, iyo beerta ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin. ayay meeshaas Ciise u dhigeen, waayo, waxay ahayd Maalintii Diyaargarayska oo Yuhuudda, oo xabaashii waa dhowayd "(Yooxanaa 19: 41-42).. Taas ka dib, aaska Ciise, meel u dhow (45 m) ee hoos ku aaseen qabrigii ah, iyo qiimeeyo sida ay u tilmaamay back to Eden, in a beerta / degaanka Eden. Sida laga soo xigtay dhaqan Yuhuudi, ee Talmud, Adam waxaa lagu aasay meel this, iyo gaar ahaan dhaqan Christian gaysteen leeyay buuraha leh dhakada Adam ayaa xabaal ka yar iskutallaabta. Laakiin si nabadgelyo Kitaabka Quduuska ah ka: "In meeshii Ciise iskutallaabta lagaga qodbay waxaa ku tiil beer, iyo beerta ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin. ayay meeshaas Ciise u dhigeen, waayo, waxay ahayd Maalintii Diyaargarayska oo Yuhuudda, oo xabaashii waa dhowayd "(Yooxanaa 19: 41-42).. Taas ka dib, aaska Ciise, meel u dhow (45 m) ee hoos ku aaseen qabrigii ah, iyo qiimeeyo sida ay u tilmaamay back to Eden, in a beerta / degaanka Eden. Sida laga soo xigtay dhaqan Yuhuudi, ee Talmud, Adam waxaa lagu aasay meel this, iyo gaar ahaan dhaqan Christian gaysteen leeyay buuraha leh dhakada Adam ayaa xabaal ka yar iskutallaabta. Laakiin si nabadgelyo Kitaabka Quduuska ah ka: "In meeshii Ciise iskutallaabta lagaga qodbay waxaa ku tiil beer, iyo beerta ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin. ayay meeshaas Ciise u dhigeen, waayo, waxay ahayd Maalintii Diyaargarayska oo Yuhuudda, oo xabaashii waa dhowayd "(Yooxanaa 19: 41-42).. iyo gaar ahaan dhaqan Christian gaysteen oo buuraha leeyay la dhakada Adam ayaa xabaal ka yar iskutallaabta. Laakiin si nabadgelyo Kitaabka Quduuska ah ka: "In meeshii Ciise iskutallaabta lagaga qodbay waxaa ku tiil beer, iyo beerta ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin. ayay meeshaas Ciise u dhigeen, waayo, waxay ahayd Maalintii Diyaargarayska oo Yuhuudda, oo xabaashii waa dhowayd "(Yooxanaa 19: 41-42).. iyo gaar ahaan dhaqan Christian gaysteen oo buuraha leeyay la dhakada Adam ayaa xabaal ka yar iskutallaabta. Laakiin si nabadgelyo Kitaabka Quduuska ah ka: "In meeshii Ciise iskutallaabta lagaga qodbay waxaa ku tiil beer, iyo beerta ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin. ayay meeshaas Ciise u dhigeen, waayo, waxay ahayd Maalintii Diyaargarayska oo Yuhuudda, oo xabaashii waa dhowayd "(Yooxanaa 19: 41-42)..
Intaas waxaa sii dheer, hadda Ezekiel 47: 1-2: "Oo waxay keeneen (" nin malaggii ", aan note.) Me dib ugu guriga (macbudka) galo, iyo biyaha bal eeg saaray ka hoos baxeen (macbudka) marinka dhinaca bari (wajahan Getsemane, Buur Saytuun oo Valley Qidroon, aan note.), waayo, guriga (macbudka) hore bari u jeedday iyo biyaha hoos u awdeen guriga (macbudka) dhinaca koonfureed, meesha allabariga dhinaceeda koonfureed. Markaasuu wuxuu iga soo bixiyey iyada oo iridda woqooyi oo waxay i geeyeen jidkii dibadda ahaa oo iridda dibadda, oo xagga bari u sii jeedday. Waxaa Wabiyo biyo arkay ayaan ka soo baxay dhinaca koonfureed (dhinaca Badda Dhimatay, aan note.). "Waxaan halkan ka akhrisan dual xoog ah (waxaa ceelal ka soo hoos baxayay marinkii dhinaca bari, iyo waxa ka dhanka koonfur ku qubanayo baxay). Ma qadiimiga ah 'Wabiyaal' isha 'maadaama ay tani duulayaan ilaa iyo mar kale, xaq ka jebusiten Arawnaah / Aarnaan jir beeralay weyn ilaa "tumi dabaqa"?
'Webiyada' il '
Fiiro gaar ah in markii Yeruusaalem Cusub tilmaamay in Muujintii 22: 1-2, waxba ma aha wax ka yar " 'il' webiyada haddana waxaa, iyo" Tree of Life ":" Oo (malaa'igtii) i tustay webi ah biyaha nolosha, oo cad dhalaalaya sidii madarad, bixiddaada Ilaah iyo carshigiisa Wanka ee. In dhexe ee wadada magaalada, labada dhinac ee webiga, waa geedka nolosha. Waxaa midho laba iyo toban jeer bil walba siiya midhihiisa, iyo caleemaha keentaa bogsiinaya quruumaha. The afar laamood weyn ee webiyaasha, ka "isha" awdeen in Eden oo waraabin jirtay beerta, ma si toos ah u tagaan si loo ogaado sababta oo ah isbedelka juqraafiga wayn. Back ka dibna, Fiishoon malaha waa Nile, Webi Yufraad, in lala kartaa in aad Webi Yufraad ee maanta, markaas Dajla la yaqiin weyn Dajla ah. Oo Giixoon, markeeda, waxaa laga yaabaa in si dhab ah loola xiriirinayo inuu Webi Urdun (2 Chronicles 32:30, John 9: 6-7): "Waxay ahayd (boqorkii) Xisqiyaah (6-700 BC, aan note. ) In joojiyay isha sare Gihonvattnets oo keentay hoos biyaha, galbeedka magaalada Daa'uud "in balliga Siloo'am la marayo tunnel ah 0.5 km (qorniinkan a dhawrayay tunnel ah, oo waxaa laga daawan karaa maanta, sharaxayaa sida laba grävarlagen ee barka la kulmay). In Isaiah 22: 9 ayaa yidhi: "Waxaad arki in magaaladii Daa'uud, waxay leeyihiin dillaacyada badan, oo aad biyaha balliga hoose." Oo xiisaha sawirka weyn (Giixoon iyo Ciise) waa waxa aan ku akhriyey John 9: 6 7: "Markii uu (Ciise) lahaa sidaas yidhi, ayuu dhulka candhuuf ku tufay, oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey, nin indha la 'ayaa indhaha subkay cajiinka oo wuxuu ku yidhi:" ga oo ku soo maydho balliga Siloo'am la' - waa means'utsänd '. Sidaas daraaddeed halkaas wuu ka tegey oo wuxuu isu soo maydhay, oo markuu yimid, ayuu arki karin. " 5 km tunnel dheer (qorniinkan a dhawrayay tunnel ah, oo waxaa laga daawan karaa maanta, sharaxayaa sida laba grävarlagen ee barka la kulmay). In Isaiah 22: 9 ayaa yidhi: "Waxaad arki in magaaladii Daa'uud, waxay leeyihiin dillaacyada badan, oo aad biyaha balliga hoose." Oo xiisaha sawirka weyn (Giixoon iyo Ciise) waa waxa aan ku akhriyey John 9: 6 7: "Markii uu (Ciise) lahaa sidaas yidhi, ayuu dhulka candhuuf ku tufay, oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey, nin indha la 'ayaa indhaha subkay cajiinka oo wuxuu ku yidhi:" ga oo ku soo maydho balliga Siloo'am la' - waa means'utsänd '. Sidaas daraaddeed halkaas wuu ka tegey oo wuxuu isu soo maydhay, oo markuu yimid, ayuu arki karin. " 5 km tunnel dheer (qorniinkan a dhawrayay tunnel ah, oo waxaa laga daawan karaa maanta, sharaxayaa sida laba grävarlagen ee barka la kulmay). In Isaiah 22: 9 ayaa yidhi: "Waxaad arki in magaaladii Daa'uud, waxay leeyihiin dillaacyada badan, oo aad biyaha balliga hoose." Oo xiisaha sawirka weyn (Giixoon iyo Ciise) waa waxa aan ku akhriyey John 9: 6 7: "Markii uu (Ciise) lahaa sidaas yidhi, ayuu dhulka candhuuf ku tufay, oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey, nin indha la 'ayaa indhaha subkay cajiinka oo wuxuu ku yidhi:" ga oo ku soo maydho balliga Siloo'am la' - waa means'utsänd '. Sidaas daraaddeed halkaas wuu ka tegey oo wuxuu isu soo maydhay, oo markuu yimid, ayuu arki karin. " "Oo xiisaha sawirka weyn (Giixoon iyo Ciise) waa waxa aan ku akhriyey John 9: 6-7:" Markii uu (Ciise) markuu sidaas yidhi, ayuu dhulka candhuuf ku tufay, oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey, nin indha la 'ayaa indhaha subkay cajiinka oo isaga u sheegay: "ga oo ku soo maydho balliga Siloo'am la '- waa means'utsänd'. Sidaas daraaddeed halkaas wuu ka tegey oo wuxuu isu soo maydhay, oo markuu yimid, ayuu arki karin. " "Oo xiisaha sawirka weyn (Giixoon iyo Ciise) waa waxa aan ku akhriyey John 9: 6-7:" Markii uu (Ciise) markuu sidaas yidhi, ayuu dhulka candhuuf ku tufay, oo candhuuftii dhoobo ka sameeyey, nin indha la 'ayaa indhaha subkay cajiinka oo isaga u sheegay: "ga oo ku soo maydho balliga Siloo'am la '- waa means'utsänd'. Sidaas daraaddeed halkaas wuu ka tegey oo wuxuu isu soo maydhay, oo markuu yimid, ayuu arki karin. "
/ Fadlan walba waxbarasho ee Kitaabka Quduuska ah ee Urdun (ay biyo dhowr macne), oo fiiriya ee iftiinka of ujpptäckter qaddiimiga ah ee maanta. /
Laakiin markaas, asal ahaan hir Wabiyaal baxay filan oo dhan afar jiho of Eden, si meesha oo dhan sidaasuu u noqday si buuxda la waraabiyo. Waxaan qiyaasayaa ah "isha" iyo laamo, ka kor ku xusan aragtay, sida sax ah / cross. Upflow dhexe, ka dibna afarta Wabiyaal jiho ka soo hor jeedda. Waxaa sidoo kale jiri doona ah model hore oo xoog badan kuwii nebiyada door Ciise iyo afarta Injiil isaga ku saabsan. Mat, iyadoo si gaar ah diiradda on badbaadinta dadka Yuhuudda ah ee. Mark, ee dareenka gaarka ah ee toobadda ka mid ah dadka Roomana way. Luke, siiyey nooleynta dadka Gariigta ah. Iyo John, ka badan loogu talagalay ilaalinta iimaanka, oo midkood kastaaba ku rumaysay. Oo waa in la ogaadaa in kuwa - iyadoo aan loo eegin xilligii hor badbaadada Masiixa, ku dhintay iimaanka waxaa ka mid ah: - iska leh sida badan in. Sidaas daraaddeed taasu waxay si joogto ah u nadiifiso: "In iimaanka ku dhintay, kuwaas oo dhan, iyagoo aan ka helay wixii loo yaboohay. Laakiin ay arkeen in meel fog oo ku soo dhaweeyay oo qirtay inuu shisheeyayaal iyo dad sodcaal dhulka uga jiri. "(Cibraaniyada 11:13) In xeerkii Christian dhakada Adam ayaa lagu aasay hoos iskutallaabta leeyay, tani waxaa lagu muujiyey by dhiigga la barwaaqaysan laba durdurrada oo iskutallaabta ka kor ku xusan - hoos on xabaashii of saqafka iyo hoos u "dhakada", taas oo markaa ka wakiil oo dhan kuwaas oo ku dhintay iimaanka, isaga sugaya, in laga adkaado lahaydeen, dembi abeeso oo gudo ah.
Fogaato badan oo dadka ka mid ah iimaanka sida tan ku saabsan Ciise gabyeen: "waxaan arkaa in hadalka uu image qurux badan ..." (Victory Toner 567 v 2). Oo mid ka mid ah sawirada sheegid first on / off / on Ciise - mid soo jiidasho leh - waa inaad wax ka barato biyaha ku qubanayo ee Garden of Eden. Ciise waa isha xurmada nolosha, waa dhab la Wadho on leeyay ah, iyo Wabiyadan socota ilaa iyo out of a "il rumaysad" ee afar "hub" - taas oo iyana uu noqdo ilo yar / durdurro, la Ciise kasta helo in uu naftiisa . In shirka naag reer Samaariya la, Ciise wuxuu ku yidhi (John 4:14): ". Biyo aan ku siin noqon doonaan il isaga la il biyo ka duulayaan tan iyo nolosha weligeed" Hal mar gaar ahaan on iid Waababka, Ciise ayaa istaagay oo qayliyey (John 7 : 38-39b): " 'Haddii qof uun harraado, waxaa i hor timid iyo waraabiyo! Kii i rumaystaa, in, sida Qorniinku wuxuu leeyahay, out of calooshiisa waxaa ka duuli doona biyaha nool ah. Kanu wuxuu yidhi oo ka mid ah Ruuxa, oo waxay heli lahaa isaga rumaysatay nool biyaha "gudaha" Markii Ciise xertii la soo diray ", iyada oo u boodboodi il upwelling ee socodka buuxa -. Ayuu ka muujiyay in ay tegi lahaa arrintan oo dhan dunida, on dhinacyada oo dhan iyo geesaha (Matayos 28: 18-20, Falimaha Rasuullada 1: 8). Ma jirto meel ka fikiray daran gaadhay, ma dadka nooca wax aan macquul aheyn inaan injiilka ku siin - ". Ilaah waa la Masiix kula heshiiyey ee (dhan) adduunka isaga qudhiisa in" Waayo, (2 Corinthians 5:19)
Cf. Tani Cross leeyay afar jiho. From Ciise, xarunta tiriyo, ka dibna tag fariin ka soo baxday inay jiho kasta, bari, iyo xagga galbeed, koonfurta iyo waqooyiga. Iyadoo sawir / sawirka kuwii nebiyada, on, off iyo on Ciise sheekada Kitaabka Quduuska ah ee "webiga magaalada hoose" weyn iyo laamaha yaryar. xitaa waxaan ku tusi karaa kasta oo kale oo ku saabsan waxa ka dibna ku dhacay ka dib dhimashadii Ciise iskutallaabta dusheeda, ka dibna dareenka "dual awood" sida in Ezekiel 47. Eeg John 19: 33-34: "Laakiin marka (askartii) Ciise iyo miinshaar yimid inuu durba dhintay kama ay jebin lugihii. Halkii dusin mid ka mid ah askartii uu dhinaca Ciise waran kaga (obliquely sii weynayd iyo wadnaha, xarunta Ciise ku dhacay), oo markiiba waxaa ka soo baxay dhiig iyo biyo. "
Back to sheegidda mustaqbalka, Ezekiel 47 v 8-9: "Markaasuu ku yidhi (malaa'igtii) inay biyo me'Detta baxayaan xagga qaybta bari ee dalka iyo socodka hoos lamadegaanka, oo markaas ka mid ah (dhintay) badda. biyo ayaa dhex maray dal u (dhintay), badda, iyo biyaha uu noqdo mid caafimaad qaba. Meel kasta oo webiyaashu la soo nooleeyey doonaa uun kasta oo nool oo dhaqdhaqaaqa ee shoals. Oo kalluunka biyaha ay jiraan aad u tiro badan, waayo, markii biyaha waxaa helo, biyaha uu noqdo mid caafimaad qaba, iyo wax walba oo ay timaado in nolosha halkaasoo webigu ku egyahay. "Badda Dhimatay waa sawir kitaabiga ah ee aadanaha. Marka aan u ogolaan habka daahirintiisa gudaha Ciise dhiig kafaaraggudka uu u qaali ah iyo vattendopets, helitaanka shaqo na in Ruuxa Quduuska ah, ka dibna waxaan kitaabku badbaadiyey, badbaadi, oo quduus ah, oo caafimaad qaba. Waxaan noqday sidayna nolosha jannada. In songs "väckelsemötenas" ka hor, waxa aan ahaa xiriir aan caadi ahayn in ay "il rumaysadka" in orday on iskutallaabta leeyay, Tusaale ahaan (eeg Victory Toner): "Halkan il la barwaaqaysan, Barakaynay iyadu u aragto! Iyadu waa mool dheer oo cad, laakiin qarsoon cad "(246) -". Ilaah waa biyaha in badan oo dumarka gaajaysan oo nin. Ilo biyo duulayaan sidii qeexnayn badan ku nool "(383) -". A cajiib ah, il cajiib ah waa isha nabrihii Ciise. Waxaa Daahiriya oo dembiyadiinna oo dhanna, waxay u caddaatay sida barafka on my lagu dhaqo. "(524)
Kitaabku waxa uu wada heysta
Yeynan baxdo runta ah. Baybalku wuxuu inoo ka caawisaa in ay sii fariinta badbaadada. Hadda waxa sida aan sheegay waqti uu ku fekero, oo aan markii si aan shaki ku adkayn. Haddii aan soo qaadanno noo gelin weyn oo qoto dheer - kitaabiga / sheegid - dhinacyo (mararka qaar qarsoon magacyada shaqsiga ah iyo meesha, ee isbedel deg deg ah kooxihii dhacdooyinka, iwm), xaalada ay tahay mid weyn in aan iska caabin karaa Iyo godad aad cadowga dhigeen dabin u qoday, tripwires set. Haa, kala duwan ee ka buuxa lay jirrabayay. Ha Ruuxa Quduuska ah waa la sara kicin badan waxba tarayn u leh oo aan rumaysad! Baybalku waa xaq! wax sii sheegidda run! Ciise had iyo jeer waa jawaabta!
Waxaa la iska xanaajin inuu wax akhriyo oo ku saabsan Maryan tii reer Magdala (John 20: 11-18), oo ku saabsan iyada la kulmaan la Ciise sara kacay janada / beerta xabaashii madhan ka baxsan. - sida marka hore iyadu ma aqoonsan, laakiin uu murugo ka fikiray, waxa uu ahaa ninkii beerta ka shaqaynayay hay'adda, "Ciise wuxuu ku yidhi, 'Kvinna, maxaad u ooyaysaa? ? Kumaad doondoonaysaa for "Iyadoo u malaynaysa inuu yahay ninkii beerta ka oo wuxuu ku yidhi:". Herre, haddaad isagii halkan ka qaadday, u sheeg meesha aad ka dhigteen, oo waxaan qaadi doonaa honom 'Ciise wuxuu ku yidhi her'Maria .'Then ayay dib u jeesatay oo waxay ku yidhaahdeen in Hebrew: '! Rabbuni' - taas oo macnaheedu yahay macalinka. Ciise wuxuu ku yidhi, 'ma ii Rør, waayo, waxaan weli kor uguma Aabbaha. Laakiin u tag walaalahay oo waxaad ku tidhaahdaa, Waxaan kor ugu tegayaa Aabbahay oo ah Aabbihiin, Ilaahay oo ah Ilaahiin.
The injiilka US, iyo qoraa music, Miles C. Austin (1868-1946), ku qoray song 1912 nooleynta: "In beerta" / "In Jannada". Oo isna wuxuu sameeyey this labadaba ka kulan Maryan tii reer Magdala ayaa la Ciise sara kacay oo xabaashii madhan ka baxsan, laakiin sidoo kale Miles ayuu naftiisa u waayo-aragnimo u yimid sidii uu u muddo ah waana mid ka mid ah kuwaas oo la kulmay "beerta" - oo ay ahayd wax of a "soo laabtay" in Garden of Eden cod yeedhidda Ilaah. Iyo marka lagu daro song ah loogu tala galay dad badan oo u yimid in ay noloshooda Ciise u siiyo markii ay maqleen waxaa lagaga gabyi, sidaas oo kale ayay noqotay in loo adeegsado sida dopsång. Kalidaa aad soo gashid "beerta" oo halkaas, mid ka mid ah anigoo goor biyaha baabtiiska / ka "webiga" galay soo socda - ilaa dhow iyo diinta gaarka ah si ay Ciise. Webiyada iyo il of iimaanka ka mid ah.
Halkan injiilka turjumey af Iswiidhish by HH 1925:
Waxaan si uu beerta of waddo u yimid, halka sayaxa weli on ubaxa. Oo codkii aan maqli, arrintaa ayaa i farxad, haatan waxaad ka heli ii.
Ref. Oo wuxuu ku hadlay codkiisii ​​ayaan maqli ee aan naaska u gaar ah, oo uu sheegay in uu Waxaan ahay. Murug iyo walaac in ay ka baxsadaan farxaddii cusub, la mid ah oo aan marnaba jirey.
Waxa uu ku baaqay in kulan si qabow, sidaas darteed hees shimbiraha stop. Waayo, luuq ah, iyadoo jacaylka Ilaah, cararaan oo dhan fikirrada culus.
In beerta, qaado waxaan doonayaa, laakiin waxaa dibadday ka qaylinayaan i dhiba. Oo haddana wuxuu i weydiiyo si ay u tagaan, in yar oo ka dhacay, iyaga, waayo, wuxuu u tegey si ay dhimasho.